ဘောလုံးကမ်းလှမ်းမှု - လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်နှင့်ဝေမျှမှု။ ရေကူးကန်ဆု: Cinoo Binance နှင့်အတူ 50.000 BUSD
ပင်မစာမျက်နှာ » ပင်မစာမျက်နှာ » ဘောလုံးကမ်းလှမ်းမှု - လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်၊ ရေကူးကန်ဆု: Binance နှင့်အတူ 50.000 BUSD
tag ကို: Binance, ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ, ဆုရေကန်
TL: DR Binance သည်ယှဉ်ပြိုင်မှုအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Football Championship ကိုစတင်ခဲ့သည်။ အများဆုံးကုန်သွယ်သူသည်အများဆုံး BUSD ကိုအနိုင်ရရှိသည်။
Copa America နှင့် EURO ဖလားဖိုင်နယ်ပွဲများအပြင်အပြိုင်အဆိုင်များသောအားကစားပြိုင်ပွဲများကိုဆင်နွှဲရန် Binance သည် BUSD ၅၀,၀၀၀ ဆုရရှိသည့်ထိတ်လန့်ကုန်သွယ်ရေးပြိုင်ပွဲကိုစတင်ခဲ့သည်။
သင်ပါ ၀ င်ရန်စိတ်ဝင်စားပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ သင်ဒီမှာဖတ်သမျှမှာဘဏ္adviceာရေးအကြံဥာဏ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး၊ Binance ဒီအမှုကိုပြု။ ကုန်သွယ်မှုသည်အလွန်အန္တရာယ်များကြောင်းသတိရပါ။
2021-07-06 09:00 AM (UTC) မှ 2021-07-12 11:59 pm (UTC) မှ
အောက်ပါတာဝန်များကိုအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်အောင်မြင်သော VIP0(ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး) နှင့် VIP 1 အသုံးပြုသူများအားလုံးသည် BUSD ဆု ၁၀,၀၀၀ ကိုညီတူညီမျှဝေမျှနိုင်သည် -
အနည်းဆုံး $ 200 ကုန်သွယ် BRL, ယူရိုသို့မဟုတ်ရူဘယ်
သင်၏ Binance UID ကိုတင်ပြခြင်းဖြင့်သင်၏ပါဝင်မှုကိုဖော်ပြပါ ဒီ module ထဲမှာ
၎င်းတို့၏ Binance UID များကိုတင်ပြချိန်တွင်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောအရည်အချင်းပြည့်မီသောထိပ်တန်း ၁၀,၀၀၀ သည် BUSD တစ်ခုစီရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အရည်အချင်းပြည့်မီသောလူ ဦး ရေ ၁၀၀၀၀ ကျော်သာရှိပါက ၁၀၀၀၀ BUSD ဆုရေကန်သည်အညီအမျှခွဲဝေခံရမည်
၄၀၀၀၀ BUSD ဆုရေကန်သည်ပထမကုန်သည် ၁၀၀ အတွက်သီးသန့်ဖြစ်သည် စုစုပေါင်းကုန်သွယ်အသံအတိုးအကျယ်အားဖြင့်ဖြစ်သည် ယှဉ်ပြိုင်မှုကာလအတွင်း EUR, RUB နှင့် BRL ကုန်သွယ်အားလုံးအတွက် (အရောင်းအ ၀ ယ်အပါအ ၀ င်) ။
အသုံးပြုသူအဆင့် BUSD ကိုနှိပ်ပါ
1st မှ 10th အထိ $ 18.000 * အသံအတိုးအကျယ်အားဖြင့်ပိုင်းခြား
11 ကနေ 50 မှ တစ် ဦး ချင်းစီ $ 400
51st မှ 100th အထိ တစ် ဦး ချင်းစီ $ 120
ပဏာမခြေလှမ်း၏ဆုဇယား Binance ဘောလုံးချန်ပီယံရှစ်
* ထိပ်ဆုံးဆု ၁၀ ဆုအတွက်ရရှိမည့်ဆုများသည်ပြိုင်ဘက်ကာလအတွင်းထိပ်ဆုံးအသုံးပြုသူ ၁၀ ဦး ၏စုစုပေါင်းအမှန်တကယ်ကုန်သွယ်မှုပမာဏနှင့်အညီအသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်း၏စုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှုပမာဏပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားလိမ့်မည်။
ယူရို၊ ရူဘီ၊ BRL မရှိသလား။
BINANCE တွင်ဝယ်ယူ BRL
သင်ဤ pappardella ဖတ်ချင်လျှင်သွားပါ ပြိုင်ဆိုင်မှု၏ဆက်ကပ်အပ်နှံစာမျက်နှာ.
ယခင်ဆောင်းပါးcryptocurrencies ဝယ်ယူရန်အတွက်အကောင်းဆုံး app ကဘာလဲ?
လာမယ့်ဆောင်းပါးအကောင်းဆုံးကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒင်္ဂါး ၁၀ ပြားနှင့် ၎င်းတို့ကို ဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ
Bitcoin Pizza Day - Binance သည်ဒေါ်လာ ၅၂,၂၀၀ တန် BTC Pizza ကိုကမ်းလှမ်းသည်